Sheeko layaab leh: Ismiidaamintii maanta ka dhacday Magaalada Muqdisho | Dhacdo
Home Wararka Maanta Sheeko layaab leh: Ismiidaamintii maanta ka dhacday Magaalada Muqdisho
Sheeko layaab leh: Ismiidaamintii maanta ka dhacday Magaalada Muqdisho
Laba ka mid ah dadkii goobjoogga u ahaa qaraxii xooganaa ee maanta ka dhacay Isgoyska Sayidka ee Magaalada Muqdisho ayaa ka sheekeeyay sida ay wax u dhaceen.
Qaraxan ayaa ka dhashay gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay, oo uu la socday naftii hallige ka tirsan maleeshiyada Ururka Al Shabaab, kaasoo bartilmaameedsaday bar kontorool oo ku taala Isgoyska Sayidka, waana kontoroolka hore ee amniga Villa Somalia laga ilaaliyo.
Mooto bajaajle lagu magacaabo Cali Cumar Cabdi oo la hadlay VOA ayaa yiri “Waxaan joogay agagaarka hore ee Madaxtooyada Villa Somalia, gaar ahaan wadada dhinaca Sayidka, anagoo iska taagan waxaa na soo galay gaari waxyaabaha qarxa ka buuxo, dhinaca Wadada Maka Al Mukarama ayuuna ka yimid. Ciidanka Dowladda Somaliya ayaa fashiliyay, xabado ayay ku rideen, ka dib mooto bajaaj wadada mareyso ayuu ku dhuftay, ka dibna bartii kontoroolka ayuu la soo haleelsaday.”
Goobjoogaha kale oo isna ka mid ah wadeyaasha mooto bajaajta ayaa VOA uga waramay dhacdo layaab leh oo goobtaasi uu kula kulmay.
“Waxaan taagnaa meesha kontoroolka, askari baa na hortaagnaa oo markaa aan dhaheyna meesha aan gudubno rakaab baa waday, Hawlwadaag baana u socday, marka wuxuu dhahay idinma sii deynayo oo meesha amni baa laga soo saaray wax mooto ah ma mareyso. Sidii anagoo ula doodeyno illaa toban mootaaley aan nahay oo tuugeyno yaa waxaan dareenay gadaal rasaas ka dhaceyso, haddaan gadaal eegnay cabaar ka dib baa waxaan aragnay baabuur xawaare ku soo socdo, waxaan arkay lug bannaanka taalo oo baabuurka candhada ku jiidanayo oo qof bani’aadamka ah uu wato.” Ayuu yiri goobjoogahan oo aan magaciisa la sheegin.
Waxa kaloo uu yiri “Waxaan arkay inay xaaladda xun tahay dib baana u orodnay aniga iyo askarigii kontoroolka taagnaa ee na hortaagnaa, markii uu arkay baabuurka inuu qof ku hoos jiro, naftiisa horuu u orday. Wuuna hor orday gaariga, anagana waan ka leexanay, meeshaas oo GYM-ka lagu cayaaro ayaan galnay, cabaar ka dib baabuurkii juguu dhahay, intuusan qarxin marka hore meeshuu ku dhacay.”
Isagoo dhacdada layaabka leh ka waramaya ayuu yiri “Cabaar markaan joognay anagoo is dhaheyno armaa mootoyaashiina wadataan ayaa is dhahnay soo baxa, ninkii faraha haayay ayaa wuxuu dhahay ma baxeysaan illaa amar dambe, waa baxeynaa baan ku dhahnay, ma baxeysaan buu nagu yiri. Sidii anagoo meesha u taagan ayuu qaraxii dhacay. Gaariga intaa ma qarxin shan illaa lix daqiiqo ka dib ayuu qarxay.”
Goobjoogahan iyo dadkii kale ee goobta jiimka lagu cayaaro ku jiray ayaa inay badbaadaan waxaa gacan ka gaystay ninkii faraha hayay, inkastoo qaddarta Alle ay halkeeda tahay.
Sidoo kale inuu khasaaraha qaraxa yaraado ayaa waxaa sahlay ciidan boolis ahaa oo ku sugnaa Isgoyska Sayidka, oo rasaaseeyay gaarigaasi, ka dib markii uu xoog kaga soo gudbay.
Sida uu sheegay Afhayeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, Dhamme Sadiiq Aadan Cali (Doodisho) waxaa qaraxaasi ku dhintay ninkii naftii halligaha ahaa iyo toddobo qof oo kale oo ku dhaawacantay.
Doodisho waxa kaloo uu sheegay in sideed gaari oo nooca raaxada ah iyo toddobo kale oo mooto bajaaj ay ku burbureen qaraxaasi, oo masuuliyadiisu ay sheegatay Al Shabaab.
Previous articleXukuumadda oo sheegtay in loo diyaargaroobay kiiska dacwadda badda
Next articleMaxaa ka soo kordhay shirkii Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada?